अचेतमा मधेस – eSajha News
प्रकाशित मिति: ३० कार्तिक २०७७, आईतवार १९:००
काैशल कुमार यादव
जब हामी मधेसको गर्छौ , यव सवैले ठुला ठुला भाषण दिने गर्छ । कसैले मधेसीलाई यो समानुपातिक समावेशी अधिकार , कसैले पुर्व स्वतन्त्रता , कसैले स्वाधीनता जस्ता ठुला ठुला शब्दहरुको प्रयोग गर्छ्न ।
तर यी शब्दहरु आफै धेरै शक्तिशाली हो , यस्ता मुद्दा बोक्नलाई सन्तुलित बिचारधारा भएको जनताको जरुरी हो । के मधेसको कति प्रतिशत जनतालाई यस्ता अधिकार् चाहिने भन्ने अनुभुति भएको छ? एउटा खोज गरौ यहि बिषयमा ? समानुपातिक निर्वाचनकै आधारमा भन्ने हो भने करिव ७०% भन्दा बढी जनताले यी शब्दहरु आफ्नो जीवनको लागि हो भन्ने अनुभुती गर्न सकेका छैन किन कि मधेस/ मधेसी अहिले अचेत ( In coma ) मा छन ।
राजनितीक चेतनाको आधारमा मधेसका जनता जीउँदो लास हुन, खाली आन्दोलनमा गएर टाउको र छातीमा साशकवर्गको गोलि खान्छ्न तर आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको लागि खबरदारी कार्यक्रम कहिले गरेको देखिन्न। मधेस आन्दोलनबाट अलि अलि परिवर्तन त भयो तर जनता जागरुक नभएको कारणले राजनेताहरु अधिकारको व्यापारी बन्यो ।
कसले कहाँ कसरी लुटदैछ यो कुरा जनतालाई राम्री थाहा छ तर जनता मैन छ । मैन जनताको बाध्यता छ्न , जनताको आवाजलाई राजनीतिक कर्मी तथा कर्मचारी तन्त्रले उठन दिएको छैन । एउटा सर्वसाधारणको पहुँच वडा अध्यक्ष भन्दा माथी हुन्न । तर यहाँ वडा अध्यक्ष भ्रष्टाचारमा डुबेको छ। मधेसमा जंगली शासन चल्दैछ। यहाको नेतृत्वले जंगली जानवर सरह जनतामाथि शासन गर्दैछ। यसको भरपुर साथ केन्द्रिय सरकारके दिदै आएको छ ।
कसरी पुग्यो अचेत अव्स्थामा मधेसी ? सन १८१६ र १८६० सुगौली सन्धी पछि मधेसको टाउको नेपालमा अनि धर भारतले लग्यो । भारतमा भविस्यमा मधेस बिद्रोह होला भनेर शुरुमै बिहार , झारखण्ड , उतर प्रदेश दिएर समस्या सुल्झाए । नेपालले पनि त्यही देखासिखी गरेर नेपाललाई भूगोलको आधारमा तराई , पहाड , हिमाल गरि तीन प्रअचेतमा मधेस जब हामी मधेसको गर्छौ , यव सवैले ठुला ठुला भाषण दिने गर्छ । कसैले मधेसीलाई यो समानुपातिक समावेशी अधिकार , कसैले पुर्व स्वतन्त्रता , कसैले स्वाधीनता जस्ता ठुला ठुला शब्दहरुको प्रयोग गर्छ्न । तर यी शब्दहरु आफै धेरै शक्तिशाली हो , यस्ता मुद्दा बोक्नलाई सन्तुलित बिचारधारा भएको जनताको जरुरी हो ।
के मधेसको कति प्रतिशत जनतालाई यस्ता अधिकार् चाहिने भन्ने अनुभुति भएको छ? एउटा खोज गरौ यहि बिषयमा ? समानुपातिक निर्वाचनकै आधारमा भन्ने हो भने करिव ७०% भन्दा बढी जनताले यी शब्दहरु आफ्नो जीवनको लागि हो भन्ने अनुभुती गर्न सकेका छैन किन कि मधेस/ मधेसी अहिले अचेत ( In coma ) मा छन ।राजनितीक चेतनाको आधारमा मधेसका जनता जीउँदो लास हुन, खाली आन्दोलनमा गएर टाउको र छातीमा साशकवर्गको गोलि खान्छ्न तर आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको लागि खबरदारी कार्यक्रम कहिले गरेको देखिन्न। मधेस आन्दोलनबाट अलि अलि परिवर्तन त भयो तर जनता जागरुक नभएको कारणले राजनेताहरु अधिकारको व्यापारी बन्यो । कसले कहाँ कसरी लुटदैछ यो कुरा जनतालाई राम्री थाहा छ तर जनता मैन छ ।
मैन जनताको बाध्यता छ्न , जनताको आवाजलाई राजनीतिक कर्मी तथा कर्मचारी तन्त्रले उठन दिएको छैन । एउटा सर्वसाधारणको पहुँच वडा अध्यक्ष भन्दा माथी हुन्न । तर यहाँ वडा अध्यक्ष भ्रष्टाचारमा डुबेको छ। मधेसमा जंगली शासन चल्दैछ। यहाको नेतृत्वले जंगली जानवर सरह जनतामाथि शासन गर्दैछ। यसको भरपुर साथ केन्द्रिय सरकारके दिदै आएको छ । कसरी पुग्यो अचेत अव्स्थामा मधेसी ? सन १८१६ र १८६० सुगौली सन्धी पछि मधेसको टाउको नेपालमा अनि धर भारतले लग्यो । भारतमा भविस्यमा मधेस बिद्रोह होला भनेर शुरुमै बिहार , झारखण्ड , उतर प्रदेश दिएर समस्या सुल्झाए ।
नेपालले पनि त्यही देखासिखी गरेर नेपाललाई भूगोलको आधारमा तराई , पहाड , हिमाल गरि तीन प्रदेशमा बिभाजन गरियो तर तर नेपालमा भारत जतिको अधिकार सम्पन्न प्रदेश भएन । यो बाहिरी शक्तिलाई देखाउनको लागि गरिएको थियो । यहिबाट मधेस नेपाली साताको अपनिवेश बन्यो । यहि बाट मधेस दिन प्रती दिन पछाडि पर्दै गयो । ऎतिहासिक हुलाकी राजमार्गलाई गोरेटो बाटोमा परिवर्तन गरि मधेसको सम्पुर्ण बस्थीलाई जंगलीको बस्थी बनाउने पहिलो प्रयास सफल भएपछी मधेसको आर्थिक केन्द्रका सहरहरु बिराटनगर , राजबिराज ,जनकपुर , बिरगंज , भैरहवा , जलेश्वर , मलङ्बा जस्ता सहरहरु बिस्थापित भयो ।
यी सहरहरु खाली भन्सारको कारणले आफ्नो अस्तित्व बचाउन पाएका छ्न । यि सहरहरुमा खोलिको शैक्षिक संस्था , ब्यापारीक उधोग , पर्यटनको लागि बनाईएको भैतिक संरचना तथा सान्सकृत सम्पदाहरु दिन प्रती दिन जिर्न हुँदै गएको छ। बिध्यानाथ झाले मधेसी काङ्ग्रेस , गजेन्द्र बाबूले सदभावना पार्टीको स्थापना गरेर नेपाली शासन पद्धति विरोधको शुरूवात गर्न भयो । मधेस नेपाली बिस्तारबादको बिरोध करिब ३० बर्ष देखि लडदै आएको छ। मधेसीको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि बिगतका दिनहरुमा चार पटक मधेस जनबिद्रोह तर नेपाली बिस्तारलाई रोक्न सकिएन ।
बरु पहिला भन्दा झनझन बढदै गएको त्तथ्यान्कले देखाएको छ। यी सबैको कारण एउटै हो कि मधेस अझै पनि अचेत अवस्थामै छ्न । सदियै देखि शोषण गर्दै आएको राजनीतिक पार्टीलाई नै अहिले पनि समर्थन गर्नु नै अचेता अवस्थाको ठूलो प्रमाण हो । त्यसै गरि बारम्बार जनतालाई सडकमा ल्याएर आफ्नो स्वार्थ तथा बिदेशी शक्तिको ईसारामा मधेसी बिरुधको सम्झौता गर्ने व्यक्तिलाई अझैसम्म जनताले सामुहिक कार्वाही गर्न सकेका छैन्न । अचेतबाट सचेतमा कसरी ल्याउने ? डा राउतको नेतृत्वको ” स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन ” ले मधेसलाई बैज्ञानिक तरिकाले सचेत बनाउन प्रयास गरेको थियो ।उहाँ धेरै सफल पनि हुनुभयो ।
राउत नेतृत्वको गठबन्धनले मधेस जनता सामु Black Buddh , madhesh tutorial part 1,2,3 तथा वीर मधेसी ,मधेस स्वराज , बैरागदेखी बचावसम्म जस्ता किताब लेखेर मधेसी जनतालाई सचेतमा ल्याउने उहाँ पहिले मधेसी हुन । यो भन्दा पहिलो कसैले पनि मधेसीलाई सचेत बनाउन यतिको ड्कुमेन्टरी बानाएको छैन । त्यसै गरि उहाँ मधेसी युवालाई जागरुक बनाउनको लागि ध्यान योगा समेतको अभियान चलाउनु भयो त ।
तर यसमा सोछे जतिको उपलब्धि उहाले पाउनु भएन । मधेसी जनतालाई आन्दोलन गराई आफ्नो स्वार्थपूरा गर्ने राजनेताहरुले पनि मधेसीलाई मार्न लगाउनु भन्दा जनतालाई सचेत बनाउनको लागि राउत जतिकै प्रयास गरेको भए अहिले मधेसी जनता अचेतमा हुने थिएन ।
अब मधेसीबाट जन्तालाई सचेतमा ल्याउनको लागि पार्टी बिस्तार गर्नु भन्दा मधेस संग संबंधित कागजपत्रको एक्ठा गरि जनताको सामु प्रस्तुत गर्नु , सबै जनाले आफ्नो क्षेत्रबाट सकेजतिको खोजतलास गरेर सम्पुर्ण मधेसी सामु प्रस्तुत गर्नु , मिडियाले मधेस सम्बन्धि रिसर्च पेपरलाई बिशेश स्थान दिनुपर्छ , विभिन्न मधेस संग सम्बन्धित संगठनहरुले आउदो पुस्तालाई मधेसको सत्य तथ्य सम्झाउनु , हाम्रो भावीपुस्तालाई सहि राजनीतिक बाटो देखाउने कार्य गरेपछी मधेसीलाई सचेत अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ ।
३० कार्तिक २०७७, आईतवार १९:०० मा प्रकाशित